‘ओलीप्रति अनुग्रहित छु, तर अब आँधी आउँदैछ
अहिलेको देशमा जुन किसिमको अवस्था छ । सतहमा हेर्दा केही देखिँदैन । तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने मुलुकको अवस्था अत्यन्तै जर्जर र संकटपूर्ण छ ।
चालक राम्रै भयो भने पनि गलत बाटोबाट हिँड्यो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन । नेताहरूमा इमानदारिता र क्षमता पनि होला, तर गलत बाटोबाट हिँड्यो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिराखेको छ ।
केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवाजी भएको भए पनि परिस्थितिमा तात्विक रुपमा फरक पर्ने थिएन । केपी ओली अलिकति राष्ट्रवादी भावना राख्ने, केही गरौं भन्ने भावना राख्ने र नयाँ–नयाँ परिकल्पना गरिराख्ने मान्छे हुनुहुन्छ । तर, नेताहरूमा त्यो खुबीको पनि कमी छ । त्यसैले व्यक्ति वा दल परिवर्तन हुँदैमा अहिलेको परिस्थितिमा सुधार हुँदैन, जबसम्म हामीले नीति र मार्गचित्र परिवर्तन गर्दैनौं ।
अहिले एकातिर देशलाई टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने विखण्डनकारी शक्ति क्रियाशील छन् । उनीहरूले क्रमशः आफ्नो प्रभाव बढाउँदै पनि लगेका छन् । विदेशीको चलखेल र प्रभाव तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा देखिएको छ ।
योजनावद्ध र संगठित रुपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान पनि संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दा देशभित्र रोजगारी नपाए ४० लाख सिर्जनशील युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सामाजिक सदभाव र एकता खल्बलिएको छ ।
राज्य संरचनाको प्रभावकारिता पनि तीव्ररुपले ह्रास आएको छ । संवैधानिक अंग, न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, शैक्षिक संस्था तीव्र पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । जसले गर्दा यी संरचनाहरूको प्रभावकारिता क्रमशः ह्रास आउँदै गइरहेको छ ।
संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन्छ, सिंगो राष्ट्रको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने आम जनताको आशा र भरोसा थियो । त्यहीअनुसार कम्युनिष्ट पार्टीले करिब दुई तिहाई मत पनि पाए । तर, आठ महिनाको कामकारवाही सन्तोषजनक छैन ।
आन्तरिक सुरक्षा कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन यो सरकार असफल भएको छ । दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आशंका र अस्थिरता कायम भएको छ । विश्व समुदायले नेपाललाई पत्याउने अवस्था घट्दै गएको छ ।
सरकारको असफलतामा व्यक्ति, दलको कमजोरी र अकर्मण्यता त छँदैछ । नीतिगत र व्यवस्थागत त्रुटीका कारणले परिस्थिति झनझन जटिल हुँदै गएको छ । सरकार त्यही कारणले असफल हुँदै गएको हो ।
ओलीजीप्रति अनुग्रंहित छु
नेकपा एमालेको नेताका रुपमा चिनजान भएदेखि केपी शर्मा ओलीसँग मेरो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि उहाँसँग सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आयो । संविधानसभामा आइसकेपछि त्यो अझै प्र्रगाढ बन्दै गयो ।
सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै निकट र आत्मीय बन्दै गयो । कतिपय विषयमा उहाँको र मेरो समान धारणा रहेको मैले पाएँ ।
कतिपयले भारतको नाकाबन्दीका बेला मैले दिल्लीमा सम्झौता गरेको आरोप पनि लगाउँछन् । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालको आन्तरिक विषयमा भारतसँग कहिल्यै पनि बहस छलफल गरेनौं । यो कुरा केपी ओलीलाई पनि थाहा छ । त्यो बेलामा सरकारमा बसेका अन्य दललाई पनि थाहा छ ।
मैले भारतमा गएर सम्झौता गरेँ भन्ने कुरा आधारहीन र कपोकल्पित हो । हामीले त्योबेलामा गरेको प्रयासस्वरुप राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच आउन नदिई नाकाबन्दीको अन्त्य गर्‍याैं । त्यो बेलामा कायम गरेको नीतिको परिणाम स्वरुप मधेसवादी दलहरू पनि संविधानको परिधिभित्र आएका छन् । र, सरकारमा पनि सहभागी छन् ।
निकट भविश्यमा नै चुनाव हुने भएपछि चुनावलाई दृष्टिगत गरेर तत्कालीन राप्रपासँग एकीकरण गर्‍याैं । हाम्रो एकीकरण भन्दा पहिला नै पशुपति समशेर राणाजीले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा सरकारमा थियो । जसले एउटै पार्टी बनिसकेपछि स्वाभाविकरुपमा हामी सत्ता पक्ष बन्न पुग्यौं । एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेका हौं । ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएर त्यो सरकारमा सहभागी भएको होइन ।
म एमाले नेताहरू र केपी ओलीजीप्रति अनुगृहित छु । मैले एकपटक अनुरोध गर्नेवित्तिकै तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग झापामा हाम्रो सहकार्य भयो । र, झापा ३ मा हाम्रो उम्मेदवारले जित्नु पनि भयो ।
त्यसअघि सहकार्य गर्न उहाँ धेरै लागि पर्नुभएको थियो । मनोनयनको दिन बिहानसम्म पनि टेलिफोनबाट तपाईँलाई कांग्रेसले धोका दिन्छ, हामी सहकार्य गरौं भन्न्ुभएको थियो । निश्चितरुपमा हामी तपाईलाई जिताउँछौं भन्नुभएको थियो । ओलीले त्यतिबेला मप्रति सदभाव राख्नुभएकै हो ।
एक पटक पुग्नै ठांउ गोसार्इंकुण्ड
अचानक ह्वात्तैं यति धेरैं घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य !
सावधान! सानो गल्तीले ठूलो क्षति
जापानको अस्पतालबाट नेपालको उपचार सम्झँदै
अग्नि एयरको ऋण तिर्न सुधीर बस्नेतलाई नेपाल बैंकको ताकेता
सौरभका परिवारको प्रश्न : आफैले घाँटी थिचेर मृत्युवरण सम्भव छ ?
फेसबुक लफडाः डिएसपीलाई आफ्नै बुहारी ‘सेक्सी’ लागेपछि…
दशैं सकिनासाथ सेलायो फलफूल बजार, तिहारको पर्खाइमा व्यापारी